Daabaca shanaad ee Koobka Qaramada Afrika (CHAN 2018) wuxuu ka dhacayaa Janaayo 13 ilaa Febraayo 4, 2018 dalka Morocco. Horyaalka difaacanaya, kooxda DR Congo ayaa ka maqan tartanka. Wejiga ugu dambeeya ee CHAN 2018 wuxuu ballan qaadayaa inuu furmayo |
Ka dib markii Côte d'Ivoire (2009), Sudan (2011), Koonfur Afrika (2014) iyo Rwanda (2016), waa Morocco si ay u abaabulaan tartanka qaramada Afrika. Koobka shanaad ee tartankan, ee loogu talagalay ciyaartoyda ka ciyaaraya dalkooda, ayaa asal ahaan ka soo jeedaa Kenya. Laakiin dib-u-dhiska hay'adda ayaa riixay Xiriirka Kubadda Cagta Afrika si uu u dejiyo CHAN 2018.
Kooxda Morocco ayaa ka mid ah kooxaha ugu cadcad
Tani waa fursad dheeraad ah oo loogu talagalay kooxda Moroccan inay ku guuleystaan ​​markii ugu horeysay taariikhdooda "Caawinta ciyaartoyda maxaliga ah". "Atlas Lions" dhab ahaantii waxay ku xisaabtamayaan taageerada dadkooda iyo maqnaanshaha laba jeer oo hore ee ku guuleystay tartanka, DR Congo (2009 iyo 2016) iyo Tunisia (2011).
Kubadda cagta Morocco ayaa ku soo laabatay midabkeedii oo ay uga mahad celinayaan xulkooda koobkii adduunka ee 2018 iyo Koobka Adduunka ee Wydad Casablanca oo ku yaala Africa Champions League. Guusha CHAN 2018, guriga, waxay xaqiijineysaa horumarintaan.
Ivoriyaanka iyo Camerooniyiin ayaa rajeynaya in ay dib u helaan
Kooxahee ayaa ka hortagi kara hamigooda Morocco? Marka la eego CHAN, ayaa la yaabay sida caadiga ah marka loo eego kan ka mid ah CAN. Iyo waxqabadka wanaagsan ee xulashada ah waxay inta badan ku xiran tahay, qayb ahaan, ku saabsan tayada diyaarinta.
Ka qeyb qaadashada afraad ee tartankan, Côte d'Ivoire waxay jeclaan lahayd inay ugu dambeyntii ku guuleysato ka dib markii ay dhammaatay 3e 2016. Guushii Febraayo ee 4 ee Casablanca ayaa u ogolaan doonta kubada Ivory Coast inay dib u soo ceshato midabkeed, halka aan u qalmin 2018 Koobka Adduunka iyo dhibaatada hey'adaha maamulka ayaa sii kordhiyay cadhada taageerayaasha.
Cameroon ayaa sidoo kale ka ciyaara qayb ka mid ah kalsoonida ay ku leedahay CHAN 2018, ka dib markii ay ku guuldareysatay inay u soo baxdo Koobka Adduunka ee Russia, iyo sannad iyo badh ka mid ah 2019 CAN. "Lions Indomitable Lions", oo ay hogaaminayaan Rigobert Song, ayaa isu diyaariyay iyagoo la ciyaaraya Nigeria (0-0), mid ka mid ah kuwa ugu cadcad.
The Cameroon Francis Ngannou, star of MMA iyo shabakadaha bulshada, January 20 2018, Francis Ngannou wejiga American Stipe Miocic horyaalka dunida feerka Ultimate ah Dagaal Championship (UFC)
Votre adresse de messagerie ne Delft oo pas publiée.